ShopRite LPGA Classic ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
ပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူ, ပေါင်း LPGA Tour ရပ်တန့်ဘို့သမိုင်းနှင့် trivia
အဆိုပါ ShopRite LPGA ဂန္ထဝင်တစ်ဦး3နှစ်မရှိခြင်းအောက်ပါ 2010 ခုနှစ် LPGA Tour မှပြန်လာ၏။ ဒါဟာအတ္တလန္တိတ်စီးတီး, NJ အပြင်ဘက်ယင်း၏ရိုးရာနေရာ၎င်း, LPGA အချိန်ဇယားအပေါ်ရိုးရာဇွန်လအစောပိုင်းရက်စွဲများသို့ပြန်သွား၏။
ဘယ်အချိန်မှာ: ဇွန်လ 8-10
အဘယ်မှာ: Galloway, နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းရှိချတ Seaview ဂေါက်ကလပ်
Ik Kim ကတတိယဆက်တိုက်အချိန်အဘို့ဤပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသူ Anna Nordqvist ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနောက်သို့လှည့်။
နှစ်ခုရိုက်ချက်များအားဖြင့် - 2015 နှင့် 2016 Champ - Kim ကပြေးသမား-up, Nordqvist ရိုက်နှက်, အောင်ပွဲအတွက် 202 မှာကိုလက်စသတ်။ ဒါဟာ LPGA Tour အပေါ်ကင်မ်ရဲ့စတုတ္ထအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အန္န Nordqvist ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဦးဆုံးပြန်-to-ပြန် Champ ဖြစ်လာ, ဒီဖြစ်ရပ်အတွက်ဒုတိယနှစ်ဆက်တိုက်ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Nordqvist လည်းသူမကခုနစျပါး birdies နှင့်မျှမ bogeys ပါဝင်သည့်နောက်ဆုံး-ပတ်ပတ်လည် 64 နှင့်အတူကလုပ်ခဲ့တယ် 196. ၏ပြိုင်ပွဲရဲ့အမှတ်ပေးစံချိန်ချည်ထားလေ၏။ Haru Nomura ပြေးသမား-up,, တဦးတည်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
LPGA ပြိုင်ပွဲ site ကို
ShopRite LPGA ဂန္ထဝင်မှတ်တမ်း:
18 တွင်း: 62 - လော်ရာဒေးဗီးစ် , 2005; Jimin Kang, 2005; ဂျနီဖာဂျွန်ဆင်, 2014
54 တွင်း: 196 - Annika Sorenstam 1998; Annika Sorenstam, 2005; အန္န Nordqvist, 2016
ShopRite LPGA Classic ဂေါက်သီးသင်တန်းများ:
အဆိုပါပြိုင်ပွဲသည်လက်ရှိတွင်အတ္တလန္တိတ်စီးတီးပြင် Gallaway, NJ အတွက်ချတ Seaview ဟိုတယ်နှင့်ဂေါက်ကလပ်မှာကစားနေပါတယ်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲအပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သင်တန်းအမှတ်စဥ်အပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
အတူတူအပန်းဖြေစခန်း (သို့သော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသင်တန်း) ကိုစက်ရုံသည် Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ် Seaview Country Club & Resort ကိုခေါ်တော်မူသောအခါ 1986 ခုနှစ်, ၌ဤအဖြစ်အပျက်၏ပထမဦးဆုံးကစားများ၏ site ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စက်ရုံနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Seaview Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ် Resort ကိုအားဖြင့် သွား. , ဒီပြိုင်ပွဲအများဆုံးမကြာခဏဒီစက်ရုံမှာအရပျကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဒါဟာအစတွင် Sands Country Club နှင့် Great ပင်လယ်အော် Resort & Country Club မှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ShopRite LPGA ဂန္ထဝင်အသေးအဖွဲများနှင့်မှတ်စုများ:
အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးနှင့်အတူ 1986 ခုနှစ်တွင်ကစားခဲ့သည် ဇူလိုင်လ Inkster ပထမဦးဆုံးဆုရှင်အဖြစ်။ Inkster 1988 ခုနှစ်နောက်တဖန်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ ShopRite LPGA ဂန္ထဝင် 1986 ကနေ 2006 ခုနှစျကနေတဆင့် LPGA အချိန်ဇယားအပေါ်နှစ်စဉ်ကစားခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာ LPGA အချိန်ဇယားကို 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်ပြန်လည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲသည်၎င်း၏သမိုင်းအပေါငျးတို့သဒါပေမယ့်တစ်နှစ်အရှည် 54 တွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ 1990 ခုနှစ်, ခရစ်ဂျွန်ဆင် ShopRite LPGA ဂန္ထဝင်၏တစ်ခုတည်းသော 72-ပေါက်ဗားရှင်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Betsy ကဘုရငျ မြားနှငျ့ Annika Sorenstam ကဒီမှာသုံးအနိုင်ပေးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူပါဆုံးအောင်ပွဲများအတွက်ပြိုင်ပွဲစံချိန်မျှဝေပါ။
သူမ၏ 30 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း LPGA အောင်ပွဲဘုရင်၏စကားပြောသော Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးခန်းမသို့သော induction အဘို့အလိုအလြောကျအရည်အချင်းပြည့်မီဘုရင်, Fame လိုအပ်ချက်များကို၏ LPGA ရဲ့ခန်းမအောက်တွင်သည်, 1995 ပြိုင်ပွဲမှာဖြစ်ပျက်ရာ။
နှင့်ပိုပြီးရှငျဘုရ: သူမရဲ့ 34 နှင့်နောက်ဆုံး LPGA အနိုင်ရ 2001 ခုနှစ် ShopRite LPGA ဂန္ထဝင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲသမိုင်း၌တစ်ဦးတည်းသာ PLAYOFF ရှိခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ Inkster ရှုံးရသောအခါ 1988 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပျက် ဗက်ဒံယလေက အပိုတွင်း၌တည်၏။
အန္န Nordqvist 2015 ခုနှစ်တွင်အနိုင်ရရှိ, ထို့နောက် 2016 မှာထပ်အနိုင်ရ - ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးထပ်ချန်ပီယံဖြစ်လာခြင်း။ 2017 ခုနှစ်တွင်တတန်းအတွက်သုံးဘို့ Going, Nordqvist ဒုတိယပြီးလေ၏။
အဆိုပါ ShopRite LPGA ဂန္ထဝင်၏ဆုရရှိသူ
(ကို p-အနိုင်ရ PLAYOFF)
2017 - Ik ကင် 202
2016 - အန္န Nordqvist, 196
2015 - အန္န Nordqvist, 205
2014 - Stacy Lewis က, 197
2013 - Karrie ဝက်ဘ်က, 209
2012 - Stacy Lewis က, 201
2010 - အာဣမြို့ Miyazato, 197
2007-09 - ကစားမ
2006 - Seon Hwa လီ 197
2004 - Cristie Kerr က 202
2003 - Angela စတန်းဖို့ဒ်, 197
2001 - Betsy ဘုရင် 201
2000 - Janice Moody, 203
1996 - Dottie ငရုတ်ကောင်း, 202
1995 - Betsy ဘုရင် 204
1994 - Donna Andrews က, 207
1993 - Shelley နေသည်နှင့်တူသည်, 204
1992 - အန်းမာရီ Palli, 207
1991 - ဂျိန်း Geddes, 208
1990 - ခရစ်ဂျွန်ဆင်, 275 (72 တွင်း)
1989 - နန်စီလိုပက်ဇ်, 206
1988 - Julie Inkster-p, 206
အတ္တလန္တိတ်စီးတီး LPGA Classic
1987 - Betsy ဘုရင် 207
1986 - Julie Inkster, 209
ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ Formats, ဘေးထွက်ဂိမ်းများနှင့်ဂေါက်ကစားပွဲအတွက်
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ်ချန်ပီယံလိဂ်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ၏ကင်းပြိုင်ပွဲ
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ် Greenbrier Classic
ငါသည်တပူးတွဲ JD / MBA ဘွဲ့ရဒီဂရီရယူနိုင်သောသငျ့သလော
တေးဂီတပွဲတော်မှကိုယူခဲ့ဖို့ထိပ်တန်း 10 ဦးအရာ
ငှက်ဆေးပညာ: Totem မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အဓိပ္ပါယ်များ
အဆင့်မိတ်ကပ် Apply လုပ်နည်း
ယင်းအလေ့အကျင့်, သမိုင်းနှင့် Hajj ၏နေ့စွဲများအကြောင်းလေ့လာပါ
'' Haber ': ယခုကြိယာရှိပါတယ်!
Vicks VapoRub ခြေပေါ်ချောင်းဆိုးသက်သာရာပါသလား?
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Dominguez Hills ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
'' por 'နဲ့' မသန်စွမ်း '' ထဲကရှုပ်ထွေးတာကို
'' တစ်ဦးကရိုးရိုးနှလုံး '- အပိုင်း 1
ပြင်သစ်အသတ်မရှိ adjective - Adjectifs indéfinis
ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်အကောင်းဆုံး Fly လှံတံငါးဖမ်းအမှတ်တံဆိပ်
အဆိုပါဟိရဂဏ "ki" နှင့် "sa" အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရေးအသားစတိုင်များ?